Dzivisa otomatiki kutanga kana uchisimudza iyo skrini paMacBook Pro 2016 | Ndinobva mac
Javier Porcar | | MacBook Pro, Tutorials
Kana modhi nyowani yeMac ikabuda pamusika, isu tinobva tarisa maitiro ayo ekunze uye pakarepo ongororo ichienda kuchikamu chemukati. Kana isu tatoziva ese maitiro ayo, isu tinotanga kuona ekutanga makomendi nezve mashandiro ayo, maitiro uye nevamwe
Uye pakupedzisira, chekupedzisira chinhu chatinoziva nezvacho hunhu hunhu. Mu2016 MacBook Pro, iro basa rekushandura iyo Mac otomatiki inosanganisirwa, patinosimudza chivharo kana kubatanidza Mac kune simba. Kune vazhinji vashandisi iri basa rakakwana, nekuti mune yakakwira chikamu chezviitiko, patinosimudza chivharo tinoda kutanga kushanda nekukasira. Mukupesana, vamwe vanosarudza kuita chiito ichi mumunhu wekutanga.Iva sezvazvingaita, iyi sarudzo inogona kuremara. Nenzira iyi, hunhu hweMac yedu huchave hwakafanana nezvataive nazvo kusvika zvino: tichafanirwa kudzvanya bhatani remagetsi kana tichida kutanga kuishandisa.
Kana iwe uchida kudzima sarudzo, iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Vhura chiteshi. Kuva chikumbiro chinowanzo shandiswa, ini ndinokurudzira kuti iwe utarise icho mukati Tarisa, Kudzvanya Cmd + Space panguva imwechete uye typing mukati mebhokisi: Terminal
Pinda unotevera kuraira:
Tevere, iyo system inofanirwa kutibvunza isu iyo Administrator password, senguva dzese dzatinoshandisa izwi rekuti Sudo.
Izvi zvaitwa, maitiro echikwata kanzura iko kutanga kwemotokari patinosimudza muvharo wechidzitiro kana kubatanidza tambo yemagetsi kuchiedza uye kuMac.
Zvine musoro Shanduko iyi inogona kudzoserwa, nekuti isu tinokoshesa kuti basa racho rakakosha pabasa redu. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kuita nhanho 1 zvakare, asi panguva ino chinyorwa chatichanyora muTerminal chichava chinotevera:
Zvino chingobata pedyo Terminal uye hunhu hweMac huchave hunodiwa nechikwata chakagadzira iyo 2016 MacBook Pro.
Zvakare kugadzirisa PRAM / NVRAM pane yedu Mac kunopa mhedzisiro yakafanana pane kunyora mutemo wepamusoro wekupedzisira. Iwe unosarudza maitiro aunoda kufambidzana ne boot yeiyo yekupedzisira Mac yakatangwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Dzivisa otomatiki kutanga kana uchisimudza iyo skrini paMacBook Pro 2016
Apple's R & D nzvimbo muYokohama, Japan kuvhura munaKurume